Home Wararka Dagaal la filayo in uu saacadaha soo socda ka qarxo Baladxaawo
Dagaal la filayo in uu saacadaha soo socda ka qarxo Baladxaawo
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo naga soo gaarayo magaalada Baladxaawo, waxaa magalaada ka socda abaabul dagaal oo cusub. Waxaana laga yaabaa in saacadaha soo socda in uu dagaal fool ka fool ah uu ka dhaco magalaada iyo nawaaxiga ku dhaw. Waxaana caawa la soo dhoobay deegano ku dhaw Baladxaawo ciidamo badan.
Dhanka kale Masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si kulul uga hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Beledxaawo ee gobolka Gedo, iyadoo halkaas uu ka dhacay dagaal saacado socday. Sida uu sheegay Wasiirka Amniga dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Janan Jubbaland uma dulqaadan doonto wixii ka dhacay Beledxaawo isla markaana ay tallaabo qaadi doonaan.
Dhanka kar wasiir Janan wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Beledxaawo, wuxuuna shacabka deegaanka ugu baaqay iney isaga baxaan magaalada si aysan dhibaato usoo gaarin.
Inkastaa oo aan la ogaynin saacada uu qarxi karo dagaalkaas laakiin waxaa la xaqiijiyay in Saacadaha soo socda la filan karo in uu halkaas ka dhaco dagaal kaas oo laga yaabo in ay Ciidamada Jubbaland dib ugula wareegaan degmada Baladxaawo.
Farmaajo ayaa dhankiisa waxa uu maalmihii la soo dhaafay ku daabulaynayay deegaankaas ciidamo kala duwan oo uu doonayo in uu kaga hortago ciidamada Jubbaland.